#shahrukh khan | Suvadin !
शाहरूख-अक्षय, काे धेरै कमाउने ?
काठमाडाैं, फागुन ११ अक्षय कुमार अभिनित फिल्म जाेली एलएलबी-टु एक सय कराेडकाे अाँकडा छुनै लागेका बेला उनकाे प्रतिस्पर्धा शाहरूख खानसँग हुने भएकाे छ। शाहरूखकाे रइसले यसअघि नै एक सय कराेडकाे विजनेस गरिसकेकाे छ। एक सय कराेडभन्दा कमाउने अक्षयकाे याे साताैं फिल्म हाे। गत वर्षमात्रै अ...
Binita Uprety 206 0
छ सय कराेडकाे चलचित्रबाट शाहरूख खान अाउट !
काठमाडाैं, फागुन ५ - केही दिनअघि बलिउड बादशाह शाहरूख खान बहुप्रतिक्षित बाहुबली-२ मा देखिने खबरले फ्यानहरूलाइ निकै खुशी दिलाकाे थियाे। मिडियामा अाएकाे रिपाेर्ट अनुसार शाहरूखलाइ चलचित्र निर्देशक एसएस राजामाैलीले अतिथि कलाकारका रूपमा भित्र्याउने साेच बनाएका थिए। शाहरूख बाहुबली-२ मा देखिने खबर स...
Binita Uprety 387 0
बाहुबलीमा शाहरूख खान!
काठमाडाैं, फागुन २ - ‘बाहुबली द बिगनिङ' ले सन् २०१५ मा बलिउड बक्स अफिसका सबै कीर्तिमान भंग गरिदियाे। एसएस राजामाैली निर्देशित उक्त फिल्मकाे अन्त्य एउटा माेडमा छाेडिएकाे थियाे, जुन यसकाे सिक्वेल ‘बाहुबली दि कन्क्लुजन' बताइने घाेषणा यसअघि नै गरिसकिएकाे छ। साे...
Binita Uprety 221 0
काठमाडाैं,माघ ७ - बलिउडका दुर्इ सुपर स्टार शाहरूख खान र ऋतिक रोशन जनवरी २५ का दिन अामने सामने हुने भएका छन्। शाहरूख खानकाे रर्इस र ऋतिक रोशनकाे काबिल चलचित्र एक साथ साेही दिन रिलिज हुँदैछन्। वर्ष २०१७ मा बलिउडमा रिलिज हुने फिल्ममध्ये ठूला स्टारहरू अभिनित चलचित्र एकसाथ रिलिज हुन ला...
काठमाडाैं, माघ ५ बलिउडका चर्चित सेलिब्रेटी करण जोहरको अात्माकथा, 'एन अनस्वीटेबल ब्वार्इ'को विमोचन गरिएको छ। भारतकाे नयाँ दिल्लीमा एक कायर्क्रमका बिच उनकाे अात्माकथा विमाेचन गरिएकाे हाे। करण जोहरकाे हरेक पार्टी र कार्यक्रममाझै यस विमोचन कार्यक्रममा पनि बलिउड स्टारको घुइ...
काठमाडाैं,माघ ५ बलिउडमा सलमान खान र शाहरूख खानकाे दाेस्ती र दुस्मनी सधैं चर्चामा रहने गर्छ। ९० काे दसकमा यी दुर्इबीचकाे दाेस्ती ‘हिट’ थियाे। यिनीहरूले अाफ्नाे दाेस्तीकाे कमाल फिल्ममा पनि देखाउँथे। जसकाे उदाहरण हुन्, त्यतिबेला सलमान र शाहरूखले अभिनय गरेका चलचित्रहरू एकपछि अर्काे...
Binita Uprety 706 0
काठमाडौं,माघ ४ बलिउड फिल्म ’रईस’को पर्खार्इ नायक शाहरुख खानका फ्यान यतिबेला गरिरहेका छन्। यो फिल्ममा धेरै वर्षपछि एक पटक फेरि ग्रे भूमिका अर्थात् खलनायकको भूमिकमा शाहरुख खान देखिनेछन्। उनको यो रुपलाई फिल्मको ट्रेलरमा रुचाएको छ। ट्रेलरमा शाहरुखको संवाद, ’कोई धन्धा&nbs...
Binita Uprety 307 0
काठमाडाैं,पुस २५ बलिउड किङ शाहरूख खान अभिनित फिल्म ‘रइस’काे यतिबेला बलिउड नगरीमा चर्चा छ। साेही फिल्मलार्इ लिएर यतिखेर थप सनसनीपूर्ण खबर बाहिर अाएकाे छ। फिल्म क्षेत्रमा १८ वर्ष बिताएका प्रतिभाशाली भारतिय अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दिकी शाहरुख खान काे आगामी फिल्म 'रईस' मा पुल...
Binita Uprety 432 0